हेर्नजाने हैन त बागलुङमा दक्षिण एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल ? –
हेर्नजाने हैन त बागलुङमा दक्षिण एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल ?
बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखादेखि पर्वतको पाङ अदुवाबारी जोड्ने निर्माणधिन एशिया कै लामो झोलुङ्गे पुलका लठ्ठा नयाँ प्रविधिमार्फत तानिएको छ । ५ सय ६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको मुख्य लठ्ठा मनकेबल चार दिन लगाएर सफलता पूर्वक तानिएको निर्माण कम्पनी थानी-बिएलटि-हिमशिखर कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि नरहरी खड्काले बताए ।
नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गरिएको लठ्ठा तान्ने चाईनिज प्रविधिको उन्ज मेशिनको प्रयोग गरेर लठ्ठा तानीएको प्राबिधिक इन्जिनियर टोपबहादुर बानीयाले बताए ।
लठ्ठा तान्ने सहजताको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले बागलुङ र पर्वतको पुल तलको सडकमा ११ मिटर विद्युत तारलाई केबल गरेको छ । पुल निर्माणको लागि तत्काल २४ वटा लठ्ठा तानेर सकिएको बानियाँले बताए ।पुलको लागि आवश्यक अन्य भौतिक संरचना तयार भएको छ । कालिगण्डकी नदिमाथि बन्दै गरेको झण्डै एक सय ३० मिटर अग्लो झोलुङ्गे पुलको चैत्रसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलको योजना रहेको बानियाँले बताए ।
पुल निर्माणले राम्रो गतिलिएको छ यसलाई हामीले पर्यटन बर्ष २०२० लाई समेत प्रमुखतामा राखेर काम अगाडि बढाएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने मुस्ताङ जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक समेत बागलुङ भएर आउने वातावरण बनाउने योजना रहेको नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।
नेपाल सरकारले लठ्ठा तान्ने प्रविधिको मेसिन चीनबाट खरिद गरेर बागलुङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा २४ ओटा लठ्ठा सफलता पुर्वक तानिएको छ । पुलको परस्क्यार फिटमा चार जना अटन सक्ने क्षमता रहेको र पुल भरिभराउ भएपनि थेग्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । पुल लामो हुने भएकाले बाइक संचालनमा रोक लगाउने योजना रहेको छ । पुलको आयु ५० वर्षसम्म हुनेछ । पुल निर्माण पछि बागलुङ बजारसँग व्यवसायिक सम्बन्ध रहेका कुश्मा नगरपालिकाका जलजला गाउँपालिकावासी लगायतका जनताका लागि सहज रूपमा पुहुँच पुग्नेछ । कालिगण्डकी नदी माथि बन्ने उक्त पुल बागलुङ प्रवेशद्वार मालढुङ्गा बजार, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालिगण्डकी करिडोर सडक खण्डको ठिकमाथि बन्ने भएकाले पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने बागलुङ नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्त प्रसाद सुवेदीले बताए ।
‘सस्पेन्सन’ पुल बिभाग मार्फत भएको खुल्ला बोलपत्र प्रकृयाबाट निर्माणको जिम्मेवारी थानी÷विएलटी÷हिमशिखर जेभी निर्माण कम्पनीले हिमशिखर कन्स्ट्रक्सनले ६ करोड ९१ लाख रुपैँयामा ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।सात करोड ९७ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको पुलको ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले निर्माण सक्नुपर्ने अवघि भन्दा एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुन लागेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक टोपबहादुर बानियाँले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि उक्त स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने चर्चा चलेपनि लठ्ठा तान्ने प्रविधि नभएकाले रोकिएको थियो । बागलुङ नगरपालिको पहलमा नेपाल सरकारले चिनबाट सो यन्त्र ल्याएको पछि कामले गति लिएको हो । २०७७ चैतमा सम्पन्न गर्ने गरी बागलुङ बजारको बाङ्गेचौरदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं १ पाङ जोड्ने ५६७ मिटर लामो उक्त पुल निर्माण सुरु गरिएको पुल २०७६ फागुन भित्रै सम्पन्न हुने भएको छ ।
« मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटकको संख्या बढ्दै
निर्माणाधिन भवन भत्किँदा ३६ को मृत्यु, २३ घाइते »
It would be better plus unique if glass bridge is made
January 27, 2020	12:25 pm